FIANARANTSOA : Tafaverina any amin’ny 85% ny fandriampahalemana – Free News
Marobe ireo tanàna saro-dalana, izay anjakan’ny dahalo.
Accueil/Fanadihadiana Manokana/FIANARANTSOA : Tafaverina any amin’ny 85% ny fandriampahalemana
Isan’ireo sokajiana ho faritra mena amin’ny asan-dahalo ny faritanin’i Fianarantsoa. Raha ny ezaka tanterahin’ny Fari-piadidian’ny Zandarimariam-pirenena ao an-toerana, tafiakatra hatrany amin’ny 85% ny fiverenan’ny fandriampahalemana, amin’izao fotoana izao. Anarivony ireo basy niparitaka teny amin’ireo olon-dratsy no efa eo am-pelatanan’ny mpitandro filaminana. Mitohy ny ezaka fampandriana ny fahalemana. Fanadihadiana…
Rado Harivelo 18 août 2020
73 3 minutes de lecture
“Ilaina hatrany ny fiaraha-miasa amin’ny eny ifotony”, hoy ny Jly Tsiketa.
Sokajiana ho isan’ny faritra mena amin’ny asan-dahalo ny any amin’ny Faritra Matsiatra Ambony, momba ny resaka tsy fandriampahalemana teo aloha teo. Ankehitriny, tafaverina hatrany amin’ny 85% ny lafiny fandriampahalemana, raha ny nambaran’ny Kaomandin’ny Fari-piadidian’ny Zandarimariam-pirenena ao Fianarantsoa, ny Jly Tsiketa Bernard. “Efa nahitana fahombiazana ny distrika telo tao anatin’ny faritanin’i Fianarantsoa, dia ny distrikan’Ikalamavony, Ambatofinandrahana, ary ny distrikan’Ihosy. Raha ny antontanisa azo nandritra ny enim-bolana voalohany, niakatra be ny tahan’ny halatr’omby tao amin’ny distrikan’Ihosy, Manandriana ary Ikalamavony. Ankehitriny, efa nody ventiny ny rano nantsakaina tao amin’ny distrikan’Ihosy, tamin’ny alalan’ny fahazoana ireo vatan-dehilahy “kartie môbily” nampiofanina, ny tohin’ny fanentanana natao ary ny fampandrian-tany notontosaina, ka antony nahatonga ny fampihenana ny tahan’ny halatr’omby”, hoy hatrany ny fanazavany. Tsy mandry andro tsy mandry alina ireo zandary manatontosa ny hetsika fampandrian-tany, any amin’ireo faritra nosokajiana ho faritra mena ireo.
Dahalo mahasahy mifanandrina…
Ho an’ny distrikan’Ikalamavony, mbola mandeha ny “Hetsika manokana”. Raha ny fanadihadiana, dahalo raindahiny miisa telo no efa tonga any amin’ny Fari-piadidian’ny Zandarimariam-pirenena ao Fianarantsoa ny anarany, izay tena mahasahy mifanandrina amin’ny mpitandro filaminana. Misy, araka izany, ireo hery manokana, iarahana amin’ny Tafika malagasy sy ny Zandary any amin’ny faritra Ambatomainty, izay manatontosa ny hetsika manokana, ary efa ho herinandro eo izao no nandehanany. Efa resy tosika ireo dahalo ireo, any amin’ny Faritra Manody, amin’izao fotoana, ka ny zava-niseho tany, raha ny angom-baovao, dia mandoro tanety sisa ny fomba fiadin’izy ireo. Efa nezahina nofehezina avokoa ireo kizo tena fieren’ireo dahalo. Mifanindran-dalana amin’izay, ny ao Ambatofinandrahana, satria ireo dahalo ireo, dia mifandray ao amin’ny Kaominina Fenoarivo, izay efa misy ny karazana fanakanana ataon’ny ZRPS Alfa 2 sy ny Kaompanian’Ambatofinandrahana.
Marobe ireo basy tratra teny amin’ireo dahalo.
Fandraisana andraikitry ny eny ifotony
Antoka iray lehibe iverenan’ny fandriampahalemana ny fandraisana andraikitry ny eny ifotony. Iray amin’ireny ny “kartie môbily” na “Quartier mobile”, izay solontenan’ny mpitandro filaminana any ifotony. Izy ireo dia mandray anjara mavitrika amin’ny rafi-piarovan-tena isan-tanàna. Tanora lahy nilatsaka an-tsitrapo, 18 ka hatramin’ny 50 taona, ary monina ao an-toerana na koa natolotr’ireo Komitin’ny fandriampahalemana. Andraikitr’ireo “kartie môbily” ny fampandriana tanteraka ny fahalemana eo amin’ny faritra iadidiany. Tsy maintsy manao fivezivezena sy manao fisafoana ao anatin’ny faritra iadidiany. Antoka iray, ipetrahan’ny fandriampahalemana, ny fanaraha-maso ny fivezivezena sy ny fanaraha-maso ny fidirana sy ny fivoahan’ny olona avy any ivelan’ny faritra iadidiany. Ireo “kartie môbily”, araka izany, dia tsy maintsy mahafantatra amin’ny antsipiriany ireo “kizo” na ireo toerana fieren’ny mpangalatr’omby. Mila mahafantatra mialoha ny faritra stratejika, misy ao amin’ny faritra iadidiany izy ireo.
Mifandray tsy tapaka amin’ireo kartie môbily” hafa, avy any amin’ny faritra mifanolo-bodirindrina aminy izy ireo, mba hahafaha-mandrindra ny paikady, amin’ny fiambenana ary hahafaha-manampina ny lalana fandalovan’ireo dahalo. Tsy maintsy mifandray tsy tapaka amin’ny mpitandro filaminana tomponandraikitra ao an-toerana izy ireo, mba hahafaha-mifampita vaovao tsy tapaka. Manam-pahefana hanao ny fisavana ireo boky sy pasipaoron’omby ary hanamarina ny kara-panondron’ny olona mifamezivezy…Manampy ireo ny fanaraha-maso ny fampiharana ny “Dina” na ireo fifanarahana izay tsy mifanohitra amin’ny lalàna manankery. Antony iray lehibe nampihena ny resaka tsy fandriampahalemana tany amin’ny Faritra Matsiatra Ambony iny ny fampandraisana andraikitra ny eny ifotony, sy ny fifehezana ny fiparitahan’ny basy.
Nahatratra 1214 ireo basy tra-tehaka tao Matsiatra Ambony
Nanambara ny Kaomandin’ny Fari-piadidian’ny Zandarimariam-pirenena ao Fianarantsoa, ny Jly Tsiketa Bernard fa
“antony niverenan’ny fandriampahalemana tao anatin’ny faritanin’i Fianarantsoa ny fahazoana ireo basy mahatratra 1214, izay efa eo am-pelatanan’ny mpitandro filaminana ankehitriny. Miisa 1154 ireo basy vita gasy tratra, niparitaka tany amin’ny Faritra Matsiatra Ambony, raha nahatratra 60 kosa, ireo basy mahery vaika. Noho ny fanentanana sy fifandresen-dahatra nataon’ireo zandary nidina an-tsehatra teny amin’ny fokontany, Kaominina, ny eny amin’ny faritra no isan’ny nahazoana ireo basy marobe ireo”.
Nisy, araka izany, ny karazana fanentanana niainga tamin’ireo mpitandro filaminana, niaraha-nisalahy niaraka tamin’ny Faritra sy ny Governora. Tsy maintsy apetraka hatrany ny fiaraha-miasa amin’ireo tomponandraikitra eny ifotony satria izy ireo no tena mahalala ny olon-dratsy ao amin’ny tanàna iray.
Nasongadin’ny Jly Tsiketa Bernard ny fisiana loharanom-baovao milaza fa misy basy Kalchnikov iray any am-pelatanan’ireo mpivarotra omby. Tsy mbola azo ambara ny anaran’io olona mitazona basy mahery vaika io, mba hisorohana ny mety tsy fahazoana izany. Iaraha-mahalala rahateo, fa ny ratsy tsy kely lalana. Tafiditra ao ireo karazana dahalo isan-tokony, tahaka ny dahalo ambony latabatra, ny dahalo delege, eny hatramin’ny zandary dahalo koa aza, izay miray tendro amin’ireo dahalo mpangalatr’omby. Matoa tafavoaka ny omby halatra, misy koa ireo mpamotsy omby, tontosain’ireo dahalo ambony latabatra ireo. Na izany aza, efa nisy ny fepetra noraisina momba ireo delege dahalo, ny zandary dahalo, amin’ny fampiharana ny tany tan-dalàna, any an-toerana.
Velom-bolo ireo Patrôn’omby…
Teo amin’ny roa volana lasa izay, nirongatra ny tsy fandriampahalemana tany amin’ny faritra Ihorombe, anatin’ny faritanin’i Fianarantsoa. Navorin’ny Kaomandin’ny Fari-piadidian’ny Zandary any an-toerana ireo mpisehatra isan-tokony eo amin’ireo mpikirakira omby, ny raiamandreny an-tanàna, nitadiavana vahaolana eo amin’ny lafiny tsy fandriampahalemana. “Vao nanomboka ny “opération” sy ny karazana fanentanana natao taty amin’ny faritra Ihorombe, sy ny resaka kalôny ary ny famerenana ny hasin’ny “kartie môbily”. Tsapanay sahady fa nody ventiny ny rano nantsakaina, eo amin’ny lafiny fandriampahalemana. Antoka lehibe iray koa, ny fividianan’omby ao amin’ny tsenan’omby fa tsy any ivelany, ialana amin’ireo omby halatra na ny fisian’ny famotsiana omby”, hoy i Martin Evariste filohan’ny fikambanana mpiompy, mpivarotr’omby ary mpikirakira omby, ao amin’ny faritra Ihorombe.
Antoka iray nisian’ny fandriampahalemana tany amin’ny faritra Ihorombe, ny fampiharana ny “Dina”, raha ny fanazavan-dRajaohita Tsitondria, isan’ireo olobe sady Patrôn’omby. Na izany aza, misy ireo olona faly amin’ny fisian’ny fandriampahalemana, ary misy ireo tsy faly amin’ny fiverenan’izany aty an-toerana. Nisy hatrany ny fikaonandoha amin’ireo mpisehatra isan-tsokajiny, izay nahatratra intelo miantoana. Nahitam-bokatra izany, ary heverina ny hitohizan’izany, mba hisian’ny tena fampandrosoana maharitra ho anay.
FIATREHANA NY FAHAVARATRA : Efa mivonona amin’ny fiakaran’ny rano ny faritra iva
Fiverenan’ny mpianatra an-tsekoly : Nojerena manokana ny fepetra sakana tsy iparitahan’ny valanaretina covid-19
Fisokafan’ny fizahantany any Nosy Be: Vonona ny mpisehatra rehetra handray ny mpizahantany